Blogs: कौसी खेतीमा कोकोपीट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यति कुरा थाहा नपाए ठगिनु हुन्छ!
कौसी खेतीमा कोकोपीट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यति कुरा थाहा नपाए ठगिनु हुन्छ!
कौसी खेतीमा संलग्न कतिपय साथीहरूले कोकोपीटको मूल्यमा भएको विविधता तथा कोकोपीट प्रयोग गर्दा कौसी खेती असफल भएको र कोकोपीट प्रयोग नगर्दा चाहि राम्रै भएको प्रतिकृया दिने गर्नु भएको छ । यस सन्दर्भमा मैले जाने बुझेको केही कुरा शेयर गर्न चाहन्छु । कोकोपीटको प्रयोग कृषिमा सामान्यतया हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिमा ब्यापकरूपमा हुने गर्दछ । अचेल container gardening अर्थात थैला/बाकसमा गरिने खेतीमा पनि यसको प्रयोग हुन थालेको छ । नर्सरीमा त यसको प्रयोग छदैछ । कौसी खेतीमा यसको प्रयोग लोकप्रिय हुनु वा बनाइनुको कारण यसको हलुका तौल र पानी धारण गर्न सक्ने क्षमता नै हो । यदि तपाइको छतमा...
कौशी खेतीमा कस्तो भाँडाहरु प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ??
कौशी खेतीका लागि यही नै भाँडा प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने छैन । अहिलेसम्म कौशी खेती गरेकाको छत, बरान्डा अनि कौशी हेर्ने हो भने, ठूलोमा बाथ टबदेखि सानोमा अन्डाको बोक्रासम्ममा विरुवा राखेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा थर्मोकोल (माछा राख्ने भाँडा) को बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । तर, कौशी खेती गर्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि, पहिले सित्तैमा अनि पछि पाँचदेखि दश रुपैयाँमा पाइने यो भाँडो अहिले सय रुपैयाँ तिर्दा समेत किन्न नपाउने अवस्था छ । तर, कौशी खेती कम खर्चमै, सकेसम्म बढी लाभ उठाउन सकिने गरी गरिने काम हो । यसैले कौशी खेती गर्नलाई कुनै निश्चित भाँडो वा निश्चित रकम...
कौशी खेतीमा कस्तो माटो प्रयोग गर्न सकिन्छ??
कुनै पनि विरुवाका लागि हुर्कन, माटोभन्दा पनि सो माटोमा हुने पोषक तत्व (खनिज) को बढी महत्व हुन्छ । यसैले माटोमा जैविक गतिविधिहरु प्राकृतिकरुपमै बढाउन सके त राम्रै हो । माटोमा हुने जीव जनावरले माटोलाई मलिलो, खुकुलो अनि उर्बर बनाउँछ । तर, धेरै अवसरमा सानो भाँडोमा यस्ता गतिविधिहरु सम्भव हुँदैनन् । यसैले कौशी खेतीका लागि सकेसम्म बढी मल मिसाएर माटोलाई हलुका बनाउँदा विरुवा राम्ररी फस्टाउँछन् । माटो हलुका बनाउने हो भने त्यसले विरुवालाई जरा फिजाउन पनि सजिलो हुन्छ र सँगै यसले कौशी वा छतमा माटोको भार पनि कम मात्र पर्छ । साथै पानी पनि माटोले राम्ररी सोस्न सक्छ । तर,...
माटो बिनाको खेती–प्रविधिबारे बुझ्नुपर्ने कुराहरू!!
माटो विनाको खेती प्रविधि के हो ? हुन त माटोबिना पनि खेती गर्न सकिन्छ भन्दा धेरैले अनौठो लाग्न सक्छ । तर यो असम्भव भने होइन । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका लागि यो प्रविधि अनौठो लाग्नु अस्वभाविक पनि होइन । सामान्यतः माटो बाहेकको अन्य बस्तु, जसलाई मीडिया पनि भनिन्छ (जस्तैः रक उल, पर्लाइट, कोकोपिट, धानको भुस, वालुवा, ग्राभेल आदि) को सहयोगमा विरुवालाई आवश्यक घुलनशील खाद्यपर्दाथ प्रदान गरी गरिने खेती प्रणालीलाई माटो बिनाको खेती भनिन्छ । यस प्रणाली विश्वका विकसति देशहरूमा धेरै पहिलादेखि प्रचलन छन् । नेपालमा भने यो प्रविधिले व्यावासयिक रूप लिन सकेको छैन । तर केही समय...
कौसी खेतीमा रोग तथा किरा नियन्त्रण कसरी गर्ने त?
किरा फट्याङ्ग्राबाट हुने चुनौती र समस्याकौशीमा रोपिएका विरुवामा सबैभन्दा ठूलो समस्या, किरा फट्याङ्ग्राकै हुन्छ । तर, यी किरा फट्याङ्ग्रालाई मार्न रसायन वा बजारी औषधी मिसाउने हो भने त बाहिर किनेर ल्याउने र घरमै उमार्ने तरकारीमा के नै फरक रहन्छ र ? त्यसैले घरमा उमार्ने तरकारी सकेसम्म जैविक तरिकाले, कुनै रसायन नमिसाइकन गरिन्छ । यसका लागि घरमै जैविक विषादि बनाउन सकिन्छ, जसले जैविक मलको काम समेत गर्छ । बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, हाम्रो कौशी खेतीमा लाग्ने किरा फट्याङ्ग्रालाई मार्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई धपाउने हाम्रो उद्देश्य हो । यसैले पहिले खेतीमा लाग्ने किरामा...